Ndezvipi zvinhu zvakanyanya kutsvakurudzwa kuEnglish uye maitiro aunogona kubatsirwa nazvo?
Wati wamboshamisika kuti ndezvipi zvinowanikwa zvakanyanya ku Amazon? Idzi ruzivo haruna kuvanzwa kune wese wese. Zvisinei, havasi vese vashandisi vevashandi, uyewo vatengesi vepaIndaneti, vanoziva kuigamuchira. Zvisinei, avo vari kutsvaga zvigadzirwa zvekutengesa pane e-commerce nzvimbo kana zvakananga kuburikidza neAmazon vanogona kufarira ruzivo urwu.
Muchikamu chino, tichakurukura zvimwe zvinhu zvakatsvakurudzwa zviri kuAmazon zvinogona kukubatsira kuita mari. Uye kana uchizopinda muhomwe yekutengeserana kana yebhizimusi bhizinesi, unogona kutora zvinhu izvi kana zvimwe zvakagadzirwa kubva kumafurati akawanda, kufanana f - magik slots retrait.i. Alibaba kana Aliexpress. Zvakare, tichakurukura nzira dzokuti tingagadzira sei purogiramu yekutsvaga kutengesa zvinhu izvi zvinopisa zvakabudirira.
Saka, ngatikurukurei zvimwe zvinhu zvinotyisa zvinowanikwa kuAmazon zvatingashandisa kuunza mari.
Zvinhu zvakatsvakwa neAsia
Tisati taenderera mberi kuhurukuro yezvinhu zvakatsvakurudzwa zveAIDS, ndinoda kukuzarura imwe duku asi inokosha e-commerce zvakavanzika. Kuti ubudirire iwe unofanirwa kujekesa kune wako, kwete pamari yako. Iwe unofanirwa kuwana dambudziko remushandisi uye kumupa iye sarudzo yakanakisisa mune maitiro ekutengesa iwe unotengesa. Kuti ugadzirise zvakakodzera kutengesa nzira, unoda kuziva kuti nei vashandi vako vangazoshandisa mari pane zvaunokumbira. Iko kune nguva dzose chikonzero chega rega kutenga. Kana iwe uchiziva chikonzero ichi, iwe unogona kutarisira nzira yekutengesa uye kuita mari nguva dzose. Chinhu chakanakisisa pamusoro pacho ndechokuti iwe unoda kunyange kukurudzira michina yako sezvo vashandi vachakufarirawo iwe. Nezvose izvi zvakataurwa, ndinoda kutaura kuti iwe unofanirwa kuisa pfungwa dzako pakutsvaga boka revanhu vari kutsvaga nzira yekugadzirisa dambudziko ravo. Kana iwe uine mukana wekuwana vanhu ava, unogona kuvatengesa zvinhu zvakasiyana-siyana zvakabatana nezvinetso zvavo pane imwe chete.
Saka, ikozvino kana uine pfungwa yekutangira bhizinesi yako yebhizimusi, tinogona kuenderera kune zvinhu zvakatsvakurudzwa zveAIDS.
Mumazuva edu, vatariri vepakombiyuta vane zvekuda nekuda kwekugadzirisa kushandiswa kwemabasa nekugadzirwa kwezvinhu uye zvinowirirana nemagadzirirwo echinangwa chimwechete seplateti uye laptops
Vanonyanya kutengwa nemabhizimusi makuru uye makambani ekudhijita sezvavanokwanisa kubatsira Zvimwe zvinotarirwa nevateereri vari mahofisi uye nzvimbo dzebasa dzinoda madhokiti makuru kune vashandi vavo Uyezve, vashandi venyu vanogona kufarira muzvigadziri zvigadzirwa, gamers uye vashandi veP PC vanowanzodikanwa muchengeti wechiitiko.
Pakati pezvinonyanya kutengwa pamakombiyuta anotarisa, tinogona kusiyanisa zvinhu zvinotevera - HP, LG, ASUS, Samsung,
Zvigaro zvemitambo zviri mufambiro mumazuva edu nekuda kwekusimudzirwa kwebasa rekutsvaga muIndaneti. Zvose zvinotambisa zvigaro zvinodhura nekutadza kuburikidza nezvo ichine iyo TOP yakatsvaga zvinhu kuAmazon. Mhando idzi dzezvigaro dzinoiswa munharaunda ine mari yakawanda yakadai semitambo yemitambo, pipiperi, nezvimwewo.
Tinokwanisa kutarisa huwandu hwematengo mumutengo uyu wemisika. Mutengo weimwe sachigaro wekutamba unogona kutanga ne $ 500 uye kukwira kusvika ku $ 20,000.
Vateereri vanogona kuva nehanya nezvibereko izvi zvinosanganisira mitambo yevashandi, varairi vemitambo, vheji vemitambo, vatambi vemitambo uye vatambi vePc uye yemavhidhiyo.
Pakati pezvinyorwa zvinonyanya kukosha mumitambo yekutamba misika, tinokwanisa kusiyanisa zvinotevera - Openwheeler, Playseat, Mutungamiriri, uye E-WIN.
Rimwe boka raunofarira zvezvinhu zvinogona kukuunza purofiti yakawanda GPS . Anenge madereji ose anoshandisa majaira aya kuenda kunzvimbo yavanoda. GPS zvigadzirwa zvinopa vashandisi ine makarita akajeka uye migwagwa kupfuura mafonifoni. Iwe haufaniri kuvimba nemamapa uye mapepa emigwagwa kana iwe une GPS. Saka, inogona kushandiswa sehuchapupu huchauya..Uyezve, izvi zvigadzirwa zvinoshandiswa uye zvinogona kushandiswa kupi zvako. Kuchengetedza rudzi urwu rwezvigadzirwa, iwe uchabatsira vashandisi kugadzirisa zvinetso zvavo zvino. Zvinoreva kuti iwe unobatsira uye zvigadzirwa zvako zvichave zvakakosha.
Vangangotenga vatengi vemagetsi e GPS vatyairi vematekisi, vafambisi, vanofambisa, vatyairi, vatyairi vekutanga, mapurisa nevarume vose vebhizimisi vanoda kuendesa mabhizinesi nemisangano.
Makambani ekutengesa maGoogle akawanda anosanganisira Garmin, Samsung, uye Rand.
Nzira yekubudirira sei paAmazon kutengesa zvinhu zvakatsvakwa TOP?
Chokutanga pane zvose, iwe unoda kugadzira nzvimbo yekuongororai zvakapoteredza chigadzirwa chaunoda kuchitengesa uye edza kutarisa iyi site pawebhu. Iwe unofanirwa kukurudzira iyi yepaiti pane zvinonyanya kuzivikanwa injini dzakadai seGoogle kana Bing nemubvunzo wako wakatarwa. Iwe unofanirwa kuumba runyoro rwezvinhu zvakakosha pamusika wako niche ecommerce keywords. Saka, iwe unoda hutsva yekutsvaga injini yekugadzirisa kana kuisa mari muchikwata chekubatanidza kuburikidza nemamwe mabhuku emagetsi kana zvikwata zvekubatana. Iwe unogona kubatsirwa nekushandisa zvinyorwa zvinotevera zvekuongorora zvivako: Kutsvaga Vatengi, Vavengi veMiterevhiti, CNet, uye Kubatanidzwa.
Pachigariro chechipiri, unogona kuenzanisa kuenzanisa nemufananidzo web web. Pano unogona kuenzanisa mararamiro emhando dzakasiyana-siyana dzinoratidza kutengesa kwevatengesi vakasiyana. Kufananidza nzvimbo hakusi kungoenderana chete nekutsvaga injini yekugadzirisa uye kunogona kutora motokari kubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana dzewebhu. Gadzirirai nzvimbo yevashanyi nezvinhu zvakasiyana-siyana, mitemo yekutengesa, maenzanisi uye kuenzanisa, uye ivo vachava vashanyi vako vanogara vachiuya, vachiuya nemigwagwa yakashandurwa.
Uye pakupedzisira, iwe unogona kugadzira bhizinesi rekiki uye utaure pamusoro pezvigadzirwa zvako niche zvakakwana. Icho chinhu chinobatsira chekutsanangurira unhu hunoratidza unyanzvi hwako munharaunda iyi uye unogadzira chimiro chakanaka chechiratidzo. Iwe unofanirwa kugovera vaverengi vako nechiremera uye zvakakunakira zvinyorwa nemafungiro anofadza uye kutsvakurudzwa kwedunhu.
Muchikamu chino, tinoungana zvinhu TOP zvakatsvakwa kuAmazon zvatinotarisira zvichakupa mamwe mazano ekugadzirwa kwezvinhu zvinokurudzira kuita mari kubva kuAmazon trading platform. Zvinhu zvandakambotaura munyaya ino, vane mutengo wakakura wekutengesera uye kutengesa zvakanaka pakati peAmazon searchers, saka iwe une mikana yese yekuita zvakanaka neAmerica business yako.